Susa i-watermark: iinkqubo kunye newebhusayithi ukuyisusa | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Encarni Arcoya | 09/09/2021 18:07 | Izixhobo zoYilo
I-Intanethi sisixhobo esintlangothi-mbini. Unokwenza imisebenzi yakho yaziwe, okanye ungabona ukuba baphela kanjani beyibile kwaye bafumane ikhredithi komnye umntu. Ngesi sizathu, uninzi lwabazobi babhenela ekubukekeni i-watermark ukufaka imifanekiso, imifanekiso kunye neefoto zomsebenzi wabo ukuzama ukunqanda obu 'busela'. Kodwa nje ukuba umthetho wenziwe, umgibe wenziwe. Kwaye kukho iindlela zokususa i-watermark.
Kufuneka sikwenze kucace ukuba siza kukufundisa ususa njani ii-watermark, kodwa hayi ukuze uye kulimaza omnye umntu, uyebe umsebenzi wabo. Kwezo meko kungcono ukuthetha nomntu ongumbhali.
1 Yintoni i-watermark?
2 Ngaba kusemthethweni ukususa i-watermark?
3 Uyisusa njani i-watermark
3.1 Isususi seWatermark
3.2 Isisusi seFotoStamp
3.3 Susa i-watermark nge-Photoshop
3.5 Iziphumo zefoto
I-watermark yaziwa ngegama layo lesiNgesi, i-watermark. Isixhobo sabazobi ukukhusela imisebenzi yabo. Imalunga nokwazisa kuloo mfanekiso ilogo, umfanekiso, ifoto, isicatshulwa ... esichaza ukuba ngubani umbhali waloo mfanekiso. Ngamanye amazwi, isebenza njengokutyikitya kombhali kungabikho mntu unokubi umsebenzi wakho.
Ezi watermark zibonakaliswa ngokungathi zihlala zicacile okanye zinombala ohambelana nalo mfanekiso, kuba, nangona ujongwe ukuba ubonakale, ayenzelwanga ukuthintela okanye kuchaphazele isiphumo somfanekiso.
Ngaba kusemthethweni ukususa i-watermark?
Ngaphambi kokuba sikuxelele ukuba siza kukufundisa ukuba uyisusa njani i-watermark. Kodwa kananjalo siyathemba ukuba awuyenzi ngenjongo yokuba umsebenzi womnye umntu. Ngaba ukungachazwanga kusemthethweni okanye akunjalo?
Impendulo ayilula njengokuba ucinga. Kwaye kuxhomekeke kwinjongo onayo ngalo mfanekiso. Ukuba uyayicima kuba uza kuyisebenzisela iinjongo zakho (umzekelo, ukwenza isikipa, ukubeka ipowusta kwigumbi lakho, njl. Njl.) Akusoloko kukho ngxaki ngayo. Ngoku, uza kuthini ukuba endaweni yokwenza isikipa into oyifunayo kukuthengisa loo mzobo ukuze benze i-t-shirts kwaye ubonise? Ungathini ukuba uza kuyisebenzisela ukugubungela ipowusta yehlabathi, okanye uqweqwe lwencwadi? Sele kukho injongo yokufumana inzuzo kumfanekiso ongengowakho, kwaye oko kungakubeka engxakini kuba umbhali ngokwakhe angakumangalela ngokusebenzisa umfanekiso wakhe ngaphandle kwesigunyaziso sakhe (nangaphandle kokuba ahlawule ngaso).
Uyisusa njani i-watermark
Emva koko siza kukunika imizekelo emininzi iinkqubo ezinokususa i-watermark kwaye ndikunikeze ngomfanekiso oya kufana nalowo unophawu, kodwa ngaphandle kwawo.
Esi sixhobo se-Apowersoft sesinye sezona zilula kwaye kulula ukuzisebenzisa. Isekwe kukufiphaza kunye nokwenza lula ukuze i-watermark ingasabonakali kwimifanekiso.
Inkqubo ilula kakhulu:
Ufaka umfanekiso kwisixhobo.
Umthunzi wendawo apho kukho i-watermark.
Unika ukuguqula. Isixhobo siza kuqala ukusebenza ngokuzenzekelayo ngaphandle kokwenza nantoni na. Kwimizuzwana nje embalwa iya kukubonelela ngomfanekiso ngaphandle kwewatch.
Olunye ukhetho onalo, kulula kakhulu ukulusebenzisa kwaye uyakhawuleza, yile. Ukwenza oku, kuya kufuneka:
Faka umfanekiso kunye ne-watermark kwinkqubo.
Khetha indawo apho ikhona i-watermark.
Cofa iqhosha lokuCima. Sukuba nexhala, ayizukuyicima loo bhokisi, kodwa iya kuyikhathalela ukuyicima ishiye wonke umfanekiso uphelele.
Asinakukuxelela ukuba izakulunga, kuba ngamanye amaxesha kuyinyani ukuba kunokubakho ukufiphala okuncinci, xa usazi ukuba bekukho into apho, kuyakothusa xa ubona. Kodwa ukuba uyabona ukuba ijongeka imbi, ungazama ezinye iinkqubo.
Susa i-watermark nge-Photoshop
Enye yeenkqubo ezaziwa kakhulu zokuhlela imifanekiso emhlabeni yi-Photoshop. Kwaye ngokucacileyo le nkqubo inokukunceda ukuba ususe ii-watermark. Ngawaphi amanyathelo onokuwathatha? Qaphela:
Faka umfanekiso kule nkqubo ukuze uvule ngayo.
Khetha isixhobo sokuphilisa iBrush.
Khetha "ngokusekwe kumxholo" njengokhetho lokugcwalisa.
Ngoku lungisa ubukhulu bebrashi kwaye uqale ukupeyinta kwintoni i-watermark. Nje ukuba uyikhulule, uya kubona ukuba i-watermark iyanyamalala ishiya kuphela indawo eyayikuyo.
Ewe kuyinyani ukuba inokuba mfiliba ngandlela ithile, kodwa oko kungcono kunegama.
Enye inkqubo onokuyisebenzisa ukususa i-watermark yile yeTeorex. Ukwenza oku, amanyathelo oza kuwathatha ngala alandelayo:
Vula umfanekiso kunye nenkqubo.
Sebenzisa i «Polygonal Lasso» isixhobo. Ngaloo nto kufuneka ukhethe yonke indawo apho i-watermark ikhona khona. Ukuba inkulu kakhulu kungcono ukuyenza ngokwendawo ezimbini okanye ezingaphezulu ukuze ungazugcwalisi ngeepikseli ezininzi kuba ngaloo ndlela uya kuba neziphumo ezingcono.
Nje ukuba ukhethe, ibhokisi ebomvu iya kuvela. Kuya kufuneka ucinezele u "Cima" ukuze inkqubo ikhathalele ukususa i-watermark.
Konke okuseleyo kukugcina iziphumo.
Le yenye ye izixhobo ezingcono zokususa amanqaku, ke ukuba usebenzisa iqhinga esikunike lona, ​​uya kufumana iziphumo ezingayi kwahluka kakhulu kunakuqala.
Ukuba awufuni ukufaka nayiphi na inkqubo kwikhompyuter yakho kwaye ufuna ukuba abanye bakunakekele ekususeleni yona, unezixhobo ezininzi ezikwi-intanethi onokuzisebenzisa. Omnye wabo nguFotoefectos, osusa i-watermark kwi-Intanethi.
Amanyathelo ekufuneka uwathathe ngala:
Vula iphepha lewebhu.
Mxelele into ofuna ukuyenza. Kule meko, into ekufuneka uyenzile kukubonisa ukuba ufuna ukususa i-watermark.
Ukuba ucofa ngokulandelayo, iya kukucela ukuba ubonise indawo apho i-watermark ofuna ukuyisusa ikhona. Cofa ku-Susa kwaye kwimizuzwana uya kuba neziphumo ezilungele ukukhutshelwa.
Kukho ongakhetha kuzo onokuzisebenzisa iziphumo zazo zingcono okanye zikwimeko embi. Umfanekiso ngokwawo uya kuba nefuthe. Ke ukuba ubona ukuba iziphumo azikwenzi uqiniseke, sukuncama kwaye uzame ezinye izixhobo ukususa i-watermark kwaye ungayiqapheli.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izixhobo zoYilo » Susa i-watermark